Vaovao - inona ny fahasamihafana? Paiso fotsy sy mavo
Inona ny fahasamihafana? Paiso fotsy sy mavo
Ny paiso mamy sy be ranony dia iray amin'ireo fahafinaretana farany amin'ny fahavaratra, fa iza no tsara kokoa: fotsy sa mavo? Mizara roa ny hevitry ny ankohonantsika. Ny sasany maniry ny paiso mavo, mitanisa ny «tsiro peach mahazatra», fa ny sasany kosa midera ny hamamin'ny paiso fotsy. Manana safidinao ve?
Avy any ivelany, ny paiso mavo sy fotsy dia miavaka amin'ny volon-kodiny - mavo lalina misy loko mena na mavokely ho an'ilay taloha mifanohitra amin'ny hatsatra sy mavokely ho an'ny farany. Ao anatiny, ny hena volamena an'ny paiso mavo dia asidra kokoa, miaraka amina tartness mellows rehefa masaka sy mihalefaka ny paiso. Ny paiso fotsy vita amin'ny volo fotsy dia ambany amin'ny asidra ary mamy mamy na mafy orina na malefaka.
Ny paiso fotsy ihany koa dia marefo kokoa ary mora mangana, izay nanakana azy ireo tsy hamidy tany amin'ny ankamaroan'ny magazay hatramin'ny taona 1980, raha novolavolaina ny karazana sarotra. Araka ny voalazan'i Russ Parsons ao amin'ny How to Pick a Peach, ny karazana paiso fotsy (sy nectarines) efa tranainy kokoa dia nanana tangy kely handanjalanjana ny siramamy, fa ireo amidy androany kosa dia mamy kokoa. Mbola afaka mahita ny sasany amin'ireo karazany taloha kokoa amin'ny tsenan'ny tantsaha ianao.
Raha ny mahandro sakafo, ny karazany roa dia azo ovaina arakaraka ny safidiny. Heverinay amin'ny ankapobeny fa ny mamy mamy sy mamy amin'ny paiso fotsy dia tena tsara ho an'ny fihinanana tsy an-tanana na fandrahoana, fa toy ny fofon'ny mavo mavo kokoa ho an'ny fanaova-mofo.
Ny paiso dia loharanom-pahalalana antioksida sy vitamina C izay takiana amin'ny fananganana sela mifangaro ao anatin'ny vatan'olombelona. Ny fihinanana sakafo izay manankarena vitamina C dia manampy ny olona hanana fanoherana fanoherana aretina ary manampy amin'ny famongorana ireo radikaly maimaim-poana manimba izay miteraka homamiadana sasany.
Ny potasioma dia singa manan-danja amin'ny tsiranoka sela sy vatana izay manampy amin'ny fanaraha-maso ny tahan'ny fo sy ny tosidra. Fluoride dia singa iray amin'ny taolana sy nify ary tena ilaina amin'ny fisorohana ny karies nify. Ilaina ny vy amin'ny fananganana sela mena.